Real Madrid iyo Barcelona oo laga soo badiyey ayaa ku kulmi doona ciyaarta aadka loo sugayo ee El Clasico oo Sabtida soo socota ka dhici doonta garoonka Camp Nou, taas oo kusoo beegantay xilli labadoodaba si lama filaan ah ay uga soo badiyeen kooxaha Cadiz iyo Getafe.
Kaddib kulamadii caalamiga ahaa ee ciyaartoyda qaarkood ay kusoo daaleen, Zinedine Zidane ayaa door biday inuu isbeddel ku sameeyo safka kooxdiisa iyadoo uu dhinacna kasoo fikirayay ciyaarta Shakhtar Donetsk ay ku marti gelin doonaan garoonka Estadio Alfredo Di Stefano Arbacada toddobaadkan oo kulanka ugu horreeya ee Champions League ee xili ciyaareedkan ay ku bilaaban doonaan.
Zidane ayaa go’aansaday inuu isbeddel ku sameeyo shaxdiisa iyadoo ay ka muuqatay inuu dhayalsanayo Cadiz oo ka timid heerka labaad. Dani Carvajal oo dhaawac laba bilood ah ku maqnaanaya iyo beddelkiisii Alvaro Odriozola oo isaguna dhaawac ah ayaa waxay keentay in difaaca midig laga ciyaarsiiyo Nacho.
Dhinaca bidix oo uu hadda iska yeedhay Ferland Mendy ayaa isagana kusoo bilowday Marcelo, halka khadka dhexena uu ka ciyaaray Isco iyo Lucas Vazquez oo garabka midig ahaa.
Afartan ciyaartoy ee uu Zidane kusoo bilaabay ciyaarta ayaa dhamaantood aad uga hooseeyey heerkii looga baahnaa, waxaanay farsamo ahaan iyo tayo ahaanba u ahaayeen kuwo liita, gaar ahaan qaybtii hore oo Cadiz ay goolka dhalisay.
Zidane ayaa ku qasbanaaday in waqtigii nasashada uu saxo qaladaadkiisa, waxaanu saaray Isco iyo Lucas Vazquez, kuwaas oo uu sii raaciyey Luka Modric iyo Sergio Ramos oo dhaawac ahaa, balse waxba iskamay beddelin natiijada ciyaarta.
Dhinaca kale, Barcelona ayuu tababare Ronald Koeman is basaasay si la mid ah Zinedine Zidane, waxaanu shaxdii uu kula ciyaaray Getafe ku sameeyey isbeddel.
Koeman ayaa u muuqday inuu kasii fikirayo labada ciyaarood ee El Clasico iyo Ferencvraros oo ay Champions League wada ciyaari doonaan Arbacada toddobaadkan.
Antoine Griezmann ayaa weerarka kusoo bilowday laakiin Ousmane Dembele ayaa muddo 11 bilood ah markii ugu horreysay kasoo muuqday safka koowaad ee kooxda
Khadka dhexe ayuu Koeman ciyaarsiiyey labadiisa xiddig ee aasaasiga ah ee Sergio Busquets iyo Frenkie de Jong oo iyaguna ka hooseeyey heerkoodii.
Waxa kale oo ciyaartan kusoo bilowday Sergino Dest iyo Pedri, halka ay kaydka fadhiyeen Philippe Coutinho iyo Ansu Fati.
Labada kooxoodba, waxa guul-darrooyinkoodani muujiyeen in ay fashilmeen siyaasaddoodii isku-beddelka ciyaartoyda, sababtoo ah, isbeddellada badan ee ay sameeyeen ayaa u keenay in guul-darrooyinkani soo gaadhaan isku hal habeen.